Crispy prawn, mango uye pesto kurumwa - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Crispy Shrimp, Mango uye Pesto Bites
Zvinokanganisa7 maminitsi12 vanhu
Iyi crispy shrimp, mango uye pesto kurumwa inobata maziso uye vakakasira kuita zvekuti vachakushamisa.
Musanganiswa wekunaka uye maumbirwo aunogona kushandisa mune yako Mhemberero dzeKisimusi kana kuti nokuda kwechisvusvuro chinokosha pane imwe nguva ipi neipi yegore.
Ona chikamu "Unoda kuziva zvakawanda ...?" kwauchazoziva kuti sei ita kuti appetizer iyi ikurumidze uye pasina matambudziko.
1 Crispy Shrimp, Mango uye Pesto Bites
2 Unoda kudzidza zvakawanda nezve idzi Crispy Shrimp, Mango uye Pesto Bites?
Yakanaka aperitif uko maflavour uye maumbirwo anosanganiswa.
Nguva yekugadzirira: 5M
Nguva yakazara: 7M
12 yakabikwa uye yakasvuurwa prawns
Mango zvimedu zvitete
2 zvimedu zvemupunga
Arugula uye macadamia pesto (ona recipe)
Mune pani inopisa tinoisa mafuta kune fry uye kupisa.
Zvichakadaro, nechigero, tinocheka zvimedu. Kuti zvive nyore, ndakazvicheka muzvikamu uye chikamu chimwe nechimwe nehafu. Nenzira iyi, zvidimbu gumi nematanhatu zvakabuda.
Apo mafuta ari kupisa zvikuru, tinoisa chimwe chezvidimbu. Tichaona kuti, mumasekonzi mashoma, vanokurumidza kuzvimba. Tinoibvisa uye tinoiisa pacolander kana pepa rekicheni kuti tibvise mafuta akawanda.
Tinoenderera mberi nezvimwe zvimedu zvimedu.
Isu tinosuka uye tinobvisa hafu yemango uye, ne mandolin, tinoita zvimedu zvitete zvatinozocheka kuita zvidimbu zvakamanikana.
Isu tinoputira ma prawn akabikwa nemashizha emango uye tinoaisa pamusoro pemucheka wakaoma.
Tinopedza kushongedza ne pesto shoma uye tinoshumira.
Unoda kudzidza zvakawanda nezve idzi Crispy Shrimp, Mango uye Pesto Bites?
Paunenge uchigadzira iyi resipi, chakanakira ndechekuti iwe une pesto yatogadzirwa kuitira kuti, kana zvasvika pakuzviunganidza, zvese zviri. zvakanyanya kugadzikana uye nekukurumidza.
Iwe unotoziva kuti pesto muto waunogona kugadzira nawo kusakwana kwezvinhu. Kune akawanda anogoneka masanganiswa uye zvakadaro zvinonaka kuti hauzoziva kuti ndeipi yekusarudza.
Panguva ino ndasarudza shanduro itsva yandakaita nearugula uye macadamia. Chokwadi ndechekuti inopa yakapfuma kubata uye inosanganiswa zvakakwana ne shrimp uye mango.
Chimwe chinokwezva resipi yanhasi ndechekuti inotambwawo nayo maficha. Muchidimbu, nekuda kweiyo crunchy base yakagadzirwa kubva ku zvimedu zvemupunga. Paunoiedza, unenge uchiifarira nekuti ivo vanokurumidza kugadzira uye vane crunchy.
Kunyangwe, kana nguva iri pauri kana uine dambudziko rakawanda mukicheni, ini ndinokurudzira kuti ukanganwe nezve mazambiringa emupunga uye uende zvakananga kune Chirongwa B.
Shandisa sehwaro snacks kuti une chokwadi chekuwana mune chero supermarket uye kunze kwenyika zvigadzirwa zvitoro. Mhedzisiro yakaenzana ne crispy uye inonakidza.
Izvo zvakare iri kukohwa nzira Iwe zvino unogona kushandisa maprawn asara kubva kune imwe resipi. Iwe unongofanira kungwarira kuti hadzina kuoma zvakanyanya asi dzinoshanda kubikwa, kuMunyu, yakabikwa, nezvimwewo.
Izvi crispy hazvigoni kuitwa pachine nguva nekuti chigadziko chinorasikirwa nekuenderana kwese asi iwe unogona kuita zvese zvinongedzo zvakagadzirirwa uye wozviunganidza nekukurumidza paminiti yekupedzisira.
Mamwe mashoko - 9 pesto sauces neese kunhu kweItaly / Yakabikwa munyu
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Nyore, Navidad
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Nyore » Crispy Shrimp, Mango uye Pesto Bites
Banana uye condensed mukaka dessert
Makuki ane polvorón manyorerwo